Orinasa famonoana poizina, mpamatsy - Mpanamboatra Fungicide any China
pestisidisa azoxystrobin 25% SC, 50% WDG, 80% WDG CAS 131860-33-8
Seho fampirantiana vokatra anarana mahazatra Azoxystrobin （71751-41-2） Anaran-kafa AZX, Amistar, Quadris Molecular formula C22H17N3O5 Formulateur Type Azoxystrobin Teknika: 97% TC, Azoxystrobin Formulated: 25% SC, 50% WDG, 80% WDG Mode of Action Ny Ny fomba fiasa dia ny fanakanana ny fisefoana mitochondrial amin'ny holatra. Izy io dia manakana ny fitsimohany, ny fitomboan'ny mycelial ary ny famokarana fungisida. Fampiharana fampiharana ny aretina voa ...
Benomylia 50% WP CAS 17804-35-2
Seho fampirantiana vokatra Anaran'ny vokatra Benomyl Fampahalalana ankapobeny Function: Fungicide famaritana: 50% WP CAS: 17804-35-2 Toxicology biolojika mandaitra am-bava LD50 am-bava lava> 5000 mg ai / kg. Ny hoditra sy ny maso LD50 mihetsiketsika moka amin'ny bitro> 5000 mg / kg; mahasalama ny hoditra, tsy maharitra amin'ny maso (bitro). Inhalation LC50 (4 h) ho an'ny voalavo> rivotra 2 mg / l. NOEL (2 y) ho an'ny voalavo> sakafo 2500 mg / kg (fitsapana ambony indrindra), tsy misy evidenc ...
Carbendazim mpamono holatra 50% SC, 50% WP CAS 10605-21-7
Detaly fampisehoana vokatra Product Product Carbendazim Function Fungicide famaritana 98% Tech, 500g / L SC Chemical Name methyl 1H-benzimidazol-2-ylcarbamate CAS No. 10605-21-7 Formir Empirical C9H9N3O2 Toxicology Oral oral oral Acute oral50 ho an'ny voalavo 6400, alika> 2500 mg / kg. Ny hoditra sy ny maso LD50 mitrandraka akutony ho an'ny bitro> 10 000, voalavo> 2000 mg / kg. Tsy mahasosotra ny hoditra sy ny maso (bitro). Tsy mpanelingelina amin'ny hoditra (kisoa ginea). Inhalat ...
famonoana poida Hydroxide varahina 77% WP
Seho fampirantiana Product Name Hydroxide Copper Function, famaritana poulety 97% TC, 77% WP, 50% WP Anaran'ny simika hydroxide (Cu (OH) 2) CAS No. 20427-59-2 Formula Empirical CuH2O2 Toxicology Oral oral oral5050 ho an'ny voalavo 489 mg / kg (teknolojia.). Ny hoditra sy ny maso LD50 mitrandraka akutony ho an'ny bitro> 3160 mg / kg. Mahasosotra mafy sy manimba ny mason-koditra, mora sosotra ny hoditra. Fofohana rivotra LC50> rivotra 2 mg / l. Kilasy fanapoizinana WHO (ai) III; EPA (famolavolana) ...
fungicide oxychloride varahina 50% WP CAS 1332-40-7
Seho fampirantiana vokatra Ny anaran'ny vokatra Copper oxychloride Fampahalalana ankapobeny Function: Fungicide famaritana: 50% WP CAS: 1332-40-7 Toxicology agrochemical efficence avo lenta LD50 am-bava mahery ho an'ny voalavo dia 700 mg / kg. Ny LD50 percutanous maranitra dia mihoatra ny 2000 mg / kg. Fampiharana fampiharana Fampihorohoroana miaro amin'ny fomba tsy voajanahary, miasa amin'ny alàlan'ny famoahana ions varahina amin'ny proteinina sy anzyme miaraka amin'ny tsiranoka holatra. Fanaraha-maso ny fahatapahan'ny setroka ovy, voatabia ...
famonoana holatra Cymoxanil 50% WDG CAS 57966-95-7
Seho fampirantiana Product Product Cymoxanil Function Fungicide famaritana 50% WDG Chemical Name 2-cyano-N - [(ethylamino) carbonyl] -2- (methoxyimino) acetamide CAS No. 57966-95-7 Formula Empirical C7H10N4O3 Toxicology Oral Acute oral LD50 ho an'ny voalavo lahy 760, voalavo vavy 1200 mg / kg. Ny hoditra sy ny maso LD50 mihetsiketsika moka amin'ny bitro> 2000 mg / kg. Tsy mahasosotra ny maso; mahasosotra hoditra kely (bitro). Tsy mpanelingelina amin'ny hoditra (kisoa ginea). ...
Thiramide Thiram98% TC, 50% WP, 70% WP, 80% WDG
Seho fampirantiana Product Name Products Thiram 80% WP CAS No. 137-26-8 Famaritana (COA) Atiny: ≥50% tahan'ny fampiatoana% r: ≥75 Fotoana fandosirana s: ≤120 MF C6H12N2S4 Fomba fiasa misy poizina io fungicide, ny hoditra ary ny fonontsiran'ny moka dia misy vokany manentana. Tanjona Thiram dia ampiasaina amin'ny fitsaboana voa mba hifehezana ny poti-trongony sy ny voam-bary, vongan-tsolika malemy sy rakotra ary fofom-barley, ahitra vovoka, harafesina, teboka misy ravina ary fakany rehetra sy ...
Product display Details Characteristics Triadimefon dia fungisida triazole misy fahombiazana avo, poizina ambany, reside ambany, faharetana lava ary fananana rafitra matanjaka. Rehefa avy variana amin'ny faritra maro amin'ilay zavamaniry izy dia afaka mitondra ao amin'ny vatan'ny zavamaniry. Izy io dia mandaitra amin'ny fisorohana, fanesorana ary fitsaboana ireo aretin-koditra sy vovoka. Izy io dia mandaitra amin'ny aretina isan-karazany toy ny vongan-katsaka, moire varimbazaha, ravina ravina varimbazaha, lo mainty mananasy, vongan-doha katsaka, sns ...
Zungicide Zung 95% TC, 80% WP CAS 137-30-4
Seho fampirantiana vokatra ANARANA ANARANA ziram CAS NO. 137-30-4 CATEGORY famolavolana fungicide 95% TC, 80% WP PACKAGING 25kg / drum na toy ny fangatahanao Application Ziram dia fungisida dithiocarbamate fambolena ampiasaina amin'ny holatra sy aretina isan-karazany. Azo ampiharina amin'ny ravina zavamaniry izy io, fa ampiasaina amin'ny tany sy / na fitsaboana voa. FAMPISEHOANA vovoka fotsy teboka mangotraka teboka mitsonika ...
Product display Details Tricyclazole dia fungisida manokana hanaraha-maso ny fipoahan'ny vary, an'ny thiazoles. Ny fomba fiasan'ny bakteria dia ny fanakanana ny fiforonan'ny melanin mifatotra, amin'ny alàlan'ny fanakanana ny fitomboan'ny tsimok'aretina sy ny sporulation adhesion, ny fisorohana ny fidiran'ny pathogen ary ny fampihenana ny famokarana spore holatra. Fanasokajiana Fungicide hafa anarana hafa tricyclazole EINECS No 255-559-5 Powder State CAS No 41814-78-2 MF C9H7N3S ...